DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha ee Isniinta maanta ah 12 Agoosto 2019 - Afrika - TELES RELAY
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha ee Isniinta maanta ah 12 Agoosto 2019 - Afrika
- Warka ku jira tiirarka wargeysyada la daabacay Isniintii waxaa xukuma dhismaha xukuumadda oo baahintiisa la soo daayay ka dib markii liiska istiraatiijiga ah ee uu gudbiyay isbahaysiga FCC-CACH.
"Xukuumadda Ilunga: su'aasha saacadaha", Ku dhawaaqida AFRICANEWS. Xogta ayaa sheegeysa in dowladdii ugu horreysay ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Felix Tshisekedi dhowaan la ogaan doono. Magaalada sare ee DRC, waxaa horeyba uga jiray ka hor dhamaadka isbuucaan. Gaar ahaan in liisaska murashaxiinta ee aaladaha CACH iyo FCC la wareejiyo, Axadda 11 Agoosto 2019, oo ku jirta gacanta Ra'iisul Wasaaraha Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Liiskaan loo soo gudbinayo liistada ayaa soo gabagabeynaya ku dhawaad ​​marxaladihii wada tashiga ahaa ee lagu aasaasay dowladda.
Under cinwaanka: "Dawlad: tirinta"XUQUUQDA AADAN waxay ku doodeysaa in waqtigan uu noqon karo midka saxda ah. Daabacaadda dowladda waa mid soo dhow. Malaha, toddobaadkan, waxaan wax ka barannaa madaxtinimada Jamhuuriyadda. Shalay fiidnimadii, Raiiselwasaaraha Sylvestre Ilunga Ilunkamba waxay heshay laba liis oo is waafaqaya oo u tartamaya dowlada laba wufuud FCC iyo CACH. Kahor wadahadal madax-ilaa-madaxa ah oo lala yeelanayo madaxa gobolka, Felix Tshisekedi. Taabashada ugu dambeysa waxaa xaqiiqdii la sameyn doonaa dhamaadka kulanka Felix Tshisekedi-Joseph Kabila, awooda akhlaaqda ee FCC. Xisaabinta ayaa la bilaabay.
Isla isla diiwaangelinta dowladda, FORUM DES AS waxay tixgelinaysaa in kubbaddu ku jirto xerada FATSHI. Waa mid aan la beddeli karin, ayaa lagu qoray qoraalka heshiiska. Waxaan si tartiib tartiib ah u xaqiijineynaa laakiin xaqiiqdii waxaan ku dhownahay ku dhawaaqista xubnaha dowladdii ugu horreysay ee xilligii Fatshi. Ka dib markii la xareeyay shalay liiska liisaska musharixiinta iyo wasiir ku xigeenada, Raiisul Wasaaraha ayaa sameynaya munaasabad ugu horeysay ka hor inta uusan dhiibin, Talaadada 13 Agoosto, madaxweynaha jamhuuriyada qeybtiisa koowaad ee ka kooban isku darka dowladda muddo dheer la sugayay.
MUUQAALKA ayaa adkeynaya, dhinaceeda, xaqiiqada ah in kasta oo waftiga CACH inta lagu guda jiray soo gudbinta liiska magacyada wasiirrada murashaxiinta ay ka koobnaayeen shan qof, in FCC uu lahaa hal qof oo kaliya, prof. Nehemiah Mwilanya. Tani waxay u ogolaatay qaar inay taageeraan doodda ah in FCC, kooxaha kaladuwan aysan ku heshiin laheyn qeybinta waaxaha. Iyo qaar kale oo dib ula soo laabanaya: oo aan kuu sheegin sidoo kale CACH, way adag tahay in lagu aamino Jean-Marc Kabund in aan ku qasban nahay in aan raacno halka uu kaliga ka xarayn karo liistada. ku socota Raiisul Wasaaraha.
Sida laga soo xigtay L'AVENIR, FCC, luqadaha qaarkood waxay sheeganayaan inay codsadeen gar-qaadida Maamulka Anshaxeed ee ku saabsan booska ugu weyn ee PPRD uu qaadan doono. Si loo rumaysto isla ilahaas, PPRD waxay ku dhici doontaa saamiga libaaxa, iyada oo ka qaadaysa dhammaan wasaaradihii wasaaradu ama cabudhinta dadka kale.
PROSPERITY waxay farta ku fiiqeysaa tifaftireheeda in toddobaadkan uu yahay usbuuca dhammaan dhibaatooyinka iyo qatarta. Dhinac, jahwareerka bulshada, oo lagu garto shaqo joojinta halkaan iyo goos gooska waxbarasho, waa la soo afjari doonaa, laakiin sidoo kale, loolanka adag ee dadweynaha marka loo eego dowlad taas oo astaan ​​u noqon doonta midabada aan aheyn ruxitaanka. nidaamkii hore, laakiin kuwa sii wadista. Iyo, dhammaan kuwa aan boos ka helin dawladda, Bahati, malaaqyada Lamuka oo indhaha ka dhigaya kuwo jilicsan Fatshi, xubnaha diimaha diimaha aan ka mid ahayn isbahaysiga xukunka haya. , aakhirka waxay caqabado ka dhigi doontaa jiritaanka tirooyinkii nidaamkii hore, oo markaa, dib ayey uga soo kaban karaan siyaasad ahaan kooxdan bulsheed si ay u bilaabaan ficillo baaxad weyn leh.